Thread: owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (24)
01-10-2016 02:26 AM
Living with simple life Join Date Jul 2007
Posts 2,687	Thanks 53,670
Thanked 46,502 Times in 2,588 Posts
05-02-2016 11:10 AM
Posts 854	Thanks 17,682
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမျိုးသားပြန်လည် သင်မြတ်ရေးအတွက်ဆုိုတဲ. ရည်ရွယ်ချက်နဲ. ဟုိုအရင် ကြံဖွံ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကုို အစုိုးရအဖွဲ.ထဲ ပါဝင်စေခဲ့သလုို တုိုင်းရင်းသားတွေကုိုလည်း အစုိုးရအဖွဲ.ထဲပါဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ.၀န်ထမ်းတွေ အစိုးရသစ်တတ်လာရင် ငါတုို.တော့ ဘာဖြစ်မလည်းဆုိုတဲ့ စုိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကုိုလည်း ဦးဇော်ဌေးလုို လူမျိုးကုို ရုံးရဲ. ပြောရေးဆုိုခွင့်ပေးတဲ့ အနေနဲ.လည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စု ဟာ တုိုင်းပြည်အတွက် ကြံဖွံလိုလူမျိုးတွေ၊ တုိုင်းရင်းသားတွေ တချိန်က စောင်းမြောင်းခဲ့တဲ့ ပြည်သူဝန်ထမ်းဆုိုတဲ့ လူမျိုးတွေနဲ. ပြေဆုို ဆက်ဆံခဲ့၊ နေရာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း ဒေါ်စု နုိုင်ငံရေးအရ အဖက်မလုပ်တဲ့ အုပ်စု သုံးစုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဦးခင်ညွန်.ရဲ. ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း အုပ်စု၊ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ. အုပ်စု နဲ. ထုိုင်းနယ်စပ်က အတုိုက်အခံအုပ်စုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တလောက မြိုင်ကြီးငူရဲ. အခြားဘာသာခြား အဆောက်အအုံတွေပေါ် အနုိုင်ထက်ကျူးးကျော် ရန်လုိုမှုတွေဟာ နုိုင်ငံရေးအရ အကြပ်ကိုင်မှုမျိုးများဖြစ်မလားလုို. ကျနော် ထင်မိပါတယ်။ မြိုင်ကြီးငူရဲ. အခုလုို လုပ်ရပ်ဟာ အချိန်ကိုက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒေါ်စု ဟာကြံဖွံတွေနဲ. နုိုင်ငံရေး အရ ဆက်ဆံတဲ့ အပေါ် ဗုိုလ်ခင်ညွန်. ကိုယ်တုိုင် ဒါမှမဟုတ် တပြည်.တပန်းတွေက မရှုစိမ့်မခံသာ ဖြစ်နေမှာတော့ မလွဲလောက်ပါဘူး။ မြိုင်ကြီးငူ အခုလုို ဘာသာရေးကျူးကျော် အနုိုင်ကျင့်မှုဟာ ဒေါ်စု ဦးဆောင်တဲ့ အစုိုးရအဖွဲ. နားရွက်တံတွေးဆွတ်လုိုက်တာပါပဲ။ အစိုးရအဖွဲ.အနေနဲ.လည်း ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ဘာသာရေး ကိစ္စကုို ကိုင်တွယ်ဖုို.ဆုိုတာ စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလုို အကြပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်ဖုို. အတွက် မြိုင်ကြိးငူ လက်နက်ကုို ထုတ်သုံးစွဲလုိုက်တာလုို.ထင်ပါတယ်။ အဲလုို စိန်ခေါ်မှု တွေ ကြောင့် အစုိုးရသစ်ဟာ ထောင်လှမ်းရေးဟောင်း ဗုိုလ်ခင်ညွန်.ကုို အဖက်လုပ်ပြောဆုိုလာလေမလားလုို. ဆုိုတာမျိုးကုို ဗုိုလ်ခင်ညွန်. ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းအုပ်စုရဲ. ယူဆနမလားလုို. ကျနော်သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြိုင်ကြီးငူဘာသာရေး ကျူျးေကျာ်ရန်စမှု ဟာ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း အုပ်စုရဲ. ဒေါ်စုအပေါ် နုိုင်ငံရေးအရ အကြပ်ကိုင်မှုများလား။ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်ကိုယ်တုိုင်ကပဲ အင်အားချိန်ခွင်လျှာ ပြသလုိုတဲ့ သဘောများလား။ ပညာရေး သပိတ်ရဲ. မူလ ရည်ရွယ်ချက်တွေကုို ပြည်သူတွေ စာနာခဲ့ပေမယ့် လက်ဝဲဆန်တဲ့ ခေါင်းမာမှုတွေကုိုတော့ အခုခါ အတော်များများက ခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန်လာကြတာ တွေ.ရပါတယ်။ သပိတ်ရဲ. ဦးဆောင်သူ အချို.မှာ လက်ဝဲယိမ်းတွေ အများဆုံးတွေ.ရသလုို ၀န်းရံသူဆုိုတဲ့ သူအများစုမှာလည်း လက်ဝဲ အမာခံတွေတွေ.ရပါတယ်။ အင်တာနက် သတင်းဓါတ်ပုံများထဲမှာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းဂူဗိမ္မာန် ရှေ.က ၀န်းရံသူ ဆုိုသူအတော်များများမှာ မြန်မာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ. ကေဒါဟောင်းတွေ ရဲ. ပုံတွေ တွေ.ရပါတယ်။ သပိတ်ဦးဆောင်သူလုို. ဆုိုတဲ့ သူတွေ တစ်ချို.ရဲ. စကားတွေဟာ ဒေါ်စုကုို ရန်စကားမဆုိုတောင် ဥပက္ခပြုတဲ့ အရပ်အယောင်တွေ တွေ.ရလုို. ယခင် ထောက်ခံသူတစ်ချို.တောင် အင်တင်တင် ဖြစ်လာကြပါတယ်။ အခုလည်း အလုပ်သမား သပိတ်ဆုိုတဲ့ သပိတ်မှာ ကွန်မြူနစ်ဟောင်းတွေနဲ. အနီရောင်သန်းနေတဲ့ လူငယ်တစ်ချို.ရဲ.ပုံရိပ်တွေလည်းတွေ.နေရပါသေးတယ်။
ဆုိုရှယ် သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့် မြန်မာနုိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ.ရဲ. အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ တွေ.ရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေ.တန်းပြည် တပ်ကုို အန်အယ်ဒီ ၀တ်စုံဝတ်ပြီး အုိုးစည်ဗုံမောင်းနဲ. ကြိုနေကြပုံတော့ ပျို.ခြင်သလုို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်ပရန် နှိမ်နင်းရာက ပြန်လာတဲ့ တပ်ကုို ကြိုတယ်ဆုိုတာကတော့ အင်မတန် ကောင်းလှပေမယ့် တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်တွေကုို တုိုက်တဲ့ စစ်တပ်ကုို အန်အန်ဒီ ၀တ်စုံနဲ.ကြိုတာကတော့ သိပ် ဘ၀င်မတွေ.ပါဘူး။ စစ်တပ်နဲ. ပေါင်းစည်းခြင်ရင်တော့ စစ်တပ်က လုပ်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ တပိုင်တနုိုင်အားဖြည်. လုပ်ကိုင်တာမျိုး ဥပမာ ရေဘေး မီးဘေး တွေမှာ စစ်တပ်က ကူညီတာမျိုးကုို အားဖြည့်တာမျိုး အားပေးတာမျိုးကုို ကြိုဆုိုပါတယ်။ အထွေထွေ သပိတ် လုို.ဆုိုတဲ့ နုိုင်ငံရေး ကလေကချေ တစ်ယောက်ရဲ. ပြောစကားမျိုးကုိုတော့ မထက်ရဲ. ဖြတ်ဖေါက်ချုပ် ကိစ္စလောက် စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပါကြောင်း …..
10-10-2016 02:56 AM
armif;awm rSm e,fjcm;apmifh&J awGudk wdkufcdkufjyD; aoewf tvuf 150 awmif,loGm;w,fwJh .. aocsmwmawmh aoewfb,fem;xm;vJ twdtusodw,f .. &J9a,mufusqHk;jyD; tMurf;orm;zufu 8 a,mufaojyD;2a,mufzrf;cH&w,f .. tJhowif;Mum;Mum;csif; b*Fvm;a'h&Sfuvnf; e,fpyfudk ppfwyfvTwfw,fwJh ..
10-13-2016 03:39 AM
Posts 119	Thanks 284